चियाको सौखिन हुनुहुन्छ भने चिया पिउने सही समय पनि थाहा पाउँनुहोस् « Pariwartan Khabar
चियाको सौखिन हुनुहुन्छ भने चिया पिउने सही समय पनि थाहा पाउँनुहोस्
6 February, 2018 9:43 am
१. सुत्नअघि चिया
२. आइरन र क्याल्सियमसँग चिया
३. ‘बेड टी’बाट हुनसक्छ एसीडिटी
४. खानापछि चिया
खाना खाएपछि चिया पिउँनुहुँदैन । यसले पाचन क्रिया ढिलो हुँदैजान्छ । चियामा रहेको फेनोलिक कम्पाउन्डले पाचन क्रियालाई बाधित गर्छ, जसले गर्दा प्रोटीन र आयरनलाई राम्ररी शरीरले ग्रहण गर्न पाउँदैन । जो व्यक्ति आइरनको कमिबाट जुधिरहेका छन्, उनीहरुले खानापछि चिया पटक्कै पिउँनुहुन्न ।